China Biyo-qaade aan Xumaan lahayn Warshada Tube-ka iyo alaab-qeybiyeyaasha |XUANZE
Inta badan loo isticmaalo in lagu soo saaro birta qaab dhismeedka kaarboon tayo sare leh iyo birta qaab dhismeedka aluminium ee tuubooyinka birta ah ee aan xidhnayn ee tuubooyinka kuleyliyaha leh cadaadis sare iyo ka sareeya.
Tuubooyinka kuleyliyaha waxay inta badan ku shaqeeyaan heerkul sare iyo cadaadis sare, tuubooyinka waxay sidoo kale mari doonaan oksaydheynta iyo daxalka hoos yimaada ficilka heerkulka sare ee gaaska qiiqa iyo uumiga biyaha.
Sidaa darteed, tuubooyinka birta ayaa looga baahan yahay inay yeeshaan xoog dulqaad sare leh, caabbinta oksaydhka sare, iyo xasilloonida qaabdhismeedka wanaagsan.
Qaybta walxaha birta: birta kaarboon iyo birta Alloy.
20G, ASTM A179 & 192, ST52, 12Cr1MoV, iwm
20G TUBO bir ah oo aan si sax ah lahayn
Dhuumaha gaarka ah ee weelka cadaadiska kuleyliyaha.
Tuubo gaar ah oo loogu talagalay kuleyliyaha.
Marka lagu daro hubinta isku dhafka kiimikada iyo sifooyinka farsamada, tuubooyinka kuleyliyaha cadaadiska sare waa in lagu sameeyaa tijaabooyinka biyostatic, ololka iyo fidinta.
Hore: Habaynta Dhuumaha Birta
Xiga: Tube Steel liin
Habaynta Dhuumaha Birta
Birta Kaarboonka ee aan Xumaan lahayn, Dhuumaha Birta ee Tooska ah ee aan Xirnayn, St52 Dhuumaha aan Xumaan lahayn, Dhuumaha Kaarboon Aan Xumaan lahayn, At 179 Tube aan cillad lahayn, Dhuumaha Haydarooliga,